Inyaniso yokuba intliziyo yomculi uNyusha ayikho into ekhululekile, yaziwa ngokuwa, kodwa akukho mntu ulindele ukuba iziganeko ziya kukhula ngokukhawuleza. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, lo mculi wavuya kubafundi bakhe ngeendaba ezingalindelekanga malunga nokudibanisa noMcebisi Jikelele weMongameli we-International Federation of Sports Igor Sivov. Igosa alizange lididelele ixesha elide kwaye lenze isipho esithandayo xa sisenza uhambo oluya eKenya.
UNyusha ngokwakhe uyavuma ukuba wayemangaliswe ngokupheleleyo. Ngethuba lokutyelela kwidolophana yasekuhlaleni yaseAfrika, abathandi bathandana ngokudanisa kunye nabahlali beendawo. Umculi akazange aqaphele indlela ebehleli ngayo esitini kwaye wamenywa ukuba athathe inxaxheba kwisithethe esingavamile. Kodwa esikhundleni se-shaman exotic u-Igor weza kuye, kwaye, eguqa phantsi, wabonisa ikhonkco encinci, apho yayingumngcebo womtshato ovelele. Ukuthintela kwingundoqo yomphefumlo wakhe, uNyusha wathatha indandatho waza wavuma ukuba ngumfazi wakhe. Ukususela kuloo mzuzu umtshakazi nomyeni baqala ukulungiselela umtshato. Ngokukhawuleza banquma ukuba bekuya kubakho imithendeleko yothando, apho kuphela izihlobo kunye nabahlobo abasondeleyo. Ngandlela-thile, abathandana abatshatile inyanga ezintathu ngaphambi komtshato waseKazan, idolophu yomyeni.
Inyaniso yokuba umtshato awuyi kuba eMoscow, abazithandayo banquma ngokukhawuleza. Yaphatha iGrisi, iSpeyin kunye ne-Afrika, kodwa ekugqibeleni yakhetha ikona yokuthandana kakhulu yehlabathi-iMaldives. Umtshakazi wayefuna ukuba, naphezu kweendawo ezingaqhelekanga, umbhiyozo wenziwa ngokuhambelana nazo zonke izithethe zomtshato ezifanelekileyo. Ngako oko, umyeni wayegubha usuku lwakhe lokugqibela "kwi-bachelor" kubangani baseAmsterdam, kunye noNtsusha "baqhekeza" kunye nabahlobo bakhe eParis, beya kwikhonsathi ka-Arina Grande, emva koko babe neqela elivuyokileyo le-pajama. Ngomso, izihlwele zafika kwisiqithi esikhulu, apho yonke into yayilungele umtshato.
Ngenxa yeso siganeko, iHhotela iFololhu ikhethiweyo yanyulwa kunye nomhlaba oqaqambileyo ojongene nolwandle. Umyili uMaria Kamenskaya uzame ukwenza le mini ukuba ikhumbule abo basandul 'ukutshata babo bonke ubomi babo. "Amashumi ama-orchids amhlophe ekhephu kunye namagqabi omhlophe amhlophe ayebonakala ephosa emoyeni, kwaye isibhakabhaka esibhakabhaka sibonakaliswa kwisimo esibuko kumgangatho. Kodwa into eyona nto kukuba sifumane ipharadesi yethu apho ngosuku lomtshato! "- ukhumbula uNtsusha.
Iholide yayihlala iintsuku ezintathu, ekubhiyozelweni kwabakho abantu abangamashumi amahlanu kuphela. Phakathi kwabo, uyise womtshakazi, owayengumalungu weqela elithi "Tender May" iqela likaVladimir Shurochkin nomkakhe, udade osanda kutshata, u-Olympic u-Marcus Shurochkina, umhlobo osondeleyo womlingisi womyeni uKonstantin Khabensky, umbonisi uDmitry Khrustalev. Ukuthobela abaculi beemvumi bepelnogo trio Box Juke. Kwaye abo abasanda kutshata nabo abazange baxhomeke. Bayivuyisa iindwendwe ngomdaniso wokuqala wendabuko, kwaye ke umyeni owenzela umthandi wakhe ingoma yokwakheka kwakhe. Ngokukhawuleza, iindwendwe zokubhiyozela kwakuyiParis Hilton kunye noLeonardo DiCaprio, ngexesha elinye ixesha eliphumayo eMaldives. Indlalifa kwi-Empire Hilton idlala abaphulaphuli bakhe i-DJ, kwaye inkwenkwezi yeTitanic yaba ngumlingani kaNtsusha wokudansa. Iinkcukacha zomtshato kunye nentlawulelo yomtshakazi kunye nomdaniso othungelayo olunxwemeni lolwandle lunokubonwa kumaphepha omagazini omtsha we-MAGLO HELLO, owanikwa ilungelo elilodwa lokukhusela esi siganeko.
Yintoni efihliweyo kwiNdlu-2 ukusuka kwiikhamera: U-Olesya Lisovskaya utshele inyaniso malunga nomboniso
Iinkwenkwezi zokubonisa ishishini, ezilahlekelwa isisindo, ngaphambi nangemva kwezithombe
Isaladi ye Spring
Indlela yokutya ngaphambi kokulala ngesondo
Ukutya kwezilwanyana phantsi kwe-pastry
Yintoni amadoda ayifunayo ngokwesini kumfazi?
Indawo yabucala yomtshato
Indlela yokulahla i-acids fatty kwesikhumba somntu
I sandwich ngeqanda